Kpido: pipeline ahịa | Martech Zone
Kpido: pipeline ahịa
Tuzdee, Machị 16, 2021 Monday, April 26, 2021 Douglas Karr
Ndị na-azụ ahịa ahịa na-arụ ọrụ nke ọma na-eji onye zụrụ ihe, ghọtara nghọta njem, na nyochaa ọfụma ahịa ha nke ọma. M na-enyere idokwa a ọzụzụ ihe banyere mgbasa ozi ahịa dijitalụ na onye na-azụ ahịa personas na ụlọ ọrụ mba ụwa ugbu a ma mmadụ rịọ maka nkọwa na atọ ahụ ka m wee chee na ọ bara uru ikwurịta. Ezubere iche Onye: Onye na-azụ ahịa personas M dere na nso nso a na onye zụrụ ahịa personas na otu ha siri dị mkpa na mbọ ị na-agba ahịa dijitalụ. Ha na-enyere aka ma zube gị
Ọnụ ọgụgụ ka ukwuu nke CRM na nyiwe nkwado nkwado na ụlọ ọrụ ahụ chọrọ njikọta, mmekọrịta, na njikwa. Onwere odida di elu na nnabata nke ngwa oru ndia nihi na o gha emeghari nzukọ gi anya, otutu oge choro ndi okacha amara na ndi mmepe ka inweta ihe obula. Ghara ikwu banyere oge ọzọ achọrọ na ntinye data yana obere ma ọ bụ enweghị ọgụgụ isi ma ọ bụ nghọta banyere njem nke atụmanya gị na ndị ahịa gị. Freshsales bụ
Ihe kpatara HubSpot ji na-akwụghị ụgwọ CRM
N’oge azụmahịa, ijikwa ozi gbasara kọntaktị gị na ndị ahịa gị esighi ike. Agbanyeghị, ka azụmaahịa gị na-etolite yana ka ị na-enwetakwu ndị ahịa ma were ndị ọrụ ọzọ, ozi gbasara kọntaktị na-agbasasị gafee mpempe akwụkwọ, akara ngosi, akwụkwọ mmado, na ncheta na-enweghị isi. Ọganihu azụmaahịa dị ịtụnanya ma ọ dị mkpa ịhazi ozi gị. Nke a bụ ebe HubSpot CRM batara. Ewubere HubSpot CRM site na ala iji kwadobe oge a
CompanyHub: CRM Software maka obere azụmaahịa gị
Tọzdee, Nọvemba 3, 2016 Saturday, January 14, 2017 Douglas Karr
Na usoro na ihe mgbochi na mmepe mmepe, anyị na-ahụ ọtụtụ nyiwe ndị ọzọ na-akụ ahịa. CompanyHub bụ obere azụmahịa CRM nke ahụ dị mfe ma nwee ike ịnye ọnụahịa nke na-agbada ka ị ga-enweta naanị ihe ịchọrọ. Ewezuga visibil pipeline nke ire ere, CRM etinyere maka ire ahịa na-enye ikike ịmegharị usoro: CompanyHub na-enye nke a ma nwee atụmatụ ndị a: Jikwaa Weebụ gị iji duzie ntughari. Na-enyere aka